Intsingiselo yamagama »Isichazi magama esisemthethweni sentsingiselo kunye nemvelaphi
Amagama esiNgesi kunye neefani
Amagama amantombazana eBhayibhile
Amagama abantwana abaziwayo
Amagama ebhayibhile amakhwenkwe
Amagama eenja adumileyo
Amagama ezinja ezincinci
Amagama ekati ase-Egypt
Amagama ekati adumileyo
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Paula
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Sofia
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Laura
Alba intsingiselo yegama
Intsingiselo yamagama-Isichazi-magama esisemthethweni samagama
Okwangoku awuyazi ifayile ye- intsingiselo yegama lakho? Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ivelaphi kwaye ivela phi? Okanye unokufuna ifayile ye- igama lonyana wakho?
Ngaphandle kwesizathu sakho sokuqonda intsingiselo yegama, ukwelona phepha lilungileyo lokufumana. Vula www.meanings-names.com sikunika i Isichazi magama esisemthethweni samagama anentsingiselo kunye nemvelaphi yawo.
Kule webhusayithi uza kufumana amagama amaninzi kunye nentsingiselo yazo. Uya kuba nakho ukwazi imvelaphi, imbali, abangcwele, kunye nezinye iinkcukacha ezininzi. Sikubonisa uluhlu lwabantu abadumileyo abanelo gama.
1 Yintoni intsingiselo yegama lakho?
2 Uluhlu lwegama le-AZ
3 Yintoni onokuyilindela kwigama elinentsingiselo yewebhusayithi?
4 Ngaba uya kufumana ntoni ngeNtsingiselo yamagama?
5 Fumana intsingiselo yosana, inkwenkwe kunye negama lamantombazana, SIMAHLA ngokupheleleyo
6 Imvelaphi yamagama?
6.1 IsiGrike, isiLatin nesiNgesi, imvelaphi yamagama
7 Kutheni ndinomdla wokwazi intsingiselo yamagama?
7.1 Uwele kumakhamandela othando
7.2 Awazi ukuba uza kumbiza athini unyana wakho?
7.3 Ukwazi intsingiselo yegama lakho uya kuba nakho ukuzazi ngcono
Yintoni intsingiselo yegama lakho?
Sinefayile ye- ikhathalogu ebanzi enamakhulu amagama Yonke incasa. Maninzi amagama ngesiSpanish kodwa sikwanikezela ngamagama kwezinye iilwimi ezinje ngesiNgesi, isiFrentshi, isiJamani, isiBasque okanye isiCatalan, ukunika imizekelo embalwa.
Nokuba ujonga igama langoku okanye eliqhelekileyo, ukuba ufuna igama elifutshane- ebelinemfashini kwiminyaka embalwa edlulileyo- okanye ukhetha igama elide, kule webhusayithi ungayifumana into oyifunayo.
Sinawo amagama anezilwanyana zasekhaya kunye nezilwanyana ezinje ngamagama ezinja okanye amagama eekati. Ingabonakala ilula kodwa ukukhetha igama lesilwanyana sakho sineengxaki zalo kuba abanini baninzi bafuna ukukhetha igama leqabane labo ngokusekwe kubungakanani babo, umbala wolusu lwabo okanye isimilo sabo.
Apha ngezantsi ungafumana uluhlu olupheleleyo lwamagama ayalelwe kwi-AZ, ukwenza kube lula kuwe ukuba usebenzise iwebhu kwaye ufumane ngokukhawuleza igama olikhangelayo. Ukuba ufuna ukufumana lonke ulwazi malunga nentsingiselo yegama olikhangelayo, kufuneka ukhethe ileta oyifunayo kwaye ucofe kuyo.
Uluhlu lwegama le-AZ
Intetho yegama lokuqala Alice
Intetho yegama lokuqala Adriana
Intsingiselo yegama lokuqala
Intetho yegama lokuqala Antonio
Intetho yegama lokuqala Andrés
Intetho yegama lokuqala Andrea
Fumana Bryan intsingiselo yegama
Intetho yegama lokuqala Blanca
Intetho yegama lokuqala Barbara
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Beatriz
Intetho yegama lokuqala Cristina
Intetho yegama lokuqala Carmen
Intetho yegama lokuqala Cristian
Intetho yegama lokuqala Carlos
Intetho yegama lokuqala Dylan
Intsingiselo ka Diego
Intetho yegama lokuqala Daniel
Intsingiselo kaEstere okanye uEstere
Intetho yegama lokuqala Elena
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Enrique
Intetho yegama lokuqala Elizabeth
Intetho yegama lokuqala Fabian
Intetho yegama lokuqala Felipe
Intetho yegama lokuqala Fernando
Intetho yegama lokuqala Fernanda
Fumana Gloria kwezinye iilwimi
Intetho yegama lokuqala Guadalupe
Fumana Uluhlu lwamagama egama Gabriel
Intetho yegama lokuqala Gabriela
Hugo inkcazo yegama lokuqala
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Hector
Intsingiselo kaIgnacio okanye uNacho
Intetho yegama lokuqala Isabel
Intsingiselo ka Ian
Intetho yegama lokuqala Joel
Intetho yegama lokuqala Jessica
Intetho yegama lokuqala Jennifer
Intetho yegama lokuqala Jonathan
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Javier
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Jorge
Intetho yegama lokuqala Juan
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Kiara
Intetho yegama lokuqala Karina
Intetho yegama lokuqala Katherine
Fumana Karla intsingiselo yegama
Intetho yegama lokuqala Karen
Intetho yesibongo Luna
Intetho yegama lokuqala Lucas
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Lorena
Intetho yegama lokuqala Lucia
Intetho yegama lokuqala Luis
Intetho yegama lokuqala Lía
Fumana Monica intsingiselo yegama
Intetho yegama lokuqala Martina
Intetho yegama lokuqala Martin
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Manuel
Amagama ane Ñ
Intsingiselo kaNowa okanye uNowa
Nicole ukuhambelana namanye amagama
Intetho yegama lokuqala Natalia
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Paulina
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Pamela
Intetho yegama lokuqala Patricia
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Paola
Intetho yegama lokuqala Roberto
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Rafael
Rosa intsingiselo yegama
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Rocío
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Raúl
Fumana Susana intsingiselo yegama
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Sandra
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Santiago
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Thiago
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Uriel
Fumana Veronica intsingiselo yegama
Uluhlu lwamagama egama Vanessa
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Valeria
Intetho yegama lokuqala Valentina
Intsingiselo ka Yesenia
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Zoe
Yintoni onokuyilindela kwigama elinentsingiselo yewebhusayithi?
Kweli phepha asizukukunikezela nge intsingiselo yegama lakho. Siyiwebhusayithi ekubhekiswa kuyo kumnatha, ekwazi ukukunika ulwazi ngakumbi kunentsingiselo nje elula.
Ngaba uya kufumana ntoni ngeNtsingiselo yamagama?
Umvelaphi. Igama Blein lithetha ntoni? Yintoni i-etymology? Ngaba uyazi iingcambu zolwimi oluvela kulo? Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngegama lakho, kuyanyanzeleka ukuba uqale ngokufunda ngemvelaphi yayo kwimbali.
Ubuntu. Ngaba ungathanda ukwazi ukuba loluphi uhlobo lomlinganiswa ekufuneka ubenalo ngokwegama lakho? Ngaba ukuthanda ezothando kubalasele kuwe? Ngaba kufanelekile ukuba ube nokudibana kwabantu okusekwe kwigama lakho? Ngaba uya kuba nethamsanqa kuthando lothando? Kule webhusayithi unokufumana ulwazi ngakumbi malunga nendawo oya kuyo.
I-Santoral. Ngaba uyazi xa ingcwele yakho, okanye eyomhlobo okanye yomntu okhethekileyo? Apha ungayenza icace ngakumbi kwaye wazi owona mhla ungcwele wakho.
Idume ngegama elifanayo. Ngabaphi abantu abadumileyo abathiywa ngegama lakho? Ngaba ungathanda ukunika umntwana wakho olandelayo igama lesithixo sakho? Kukho amagama athandwayo kakhulu onokuzisekela kuwo… ukusebenzisa igama labantu abadumileyo yinto ehlala ifashoni.
Ukuncitshiswa (hypocoristic): Ngawo la magama asetyenziswa njengophawu lokusondela, nkqu nabantu abasondeleyo bahlala beyisebenzisa ngaphezulu kwegama ngokwalo. Apha ungafumana ezona zibalaseleyo nezona zixhaphakileyo kwiSpanish.
Curiosities. Amagama afanelekileyo awagcini nje ukugcina imbali epheleleyo emva kwabo, kodwa nazo zonke iintlobo zeemigina eziza kusenza siphume. Abanye babeyinxalenye yezithethe zookhokho ukusukela ekuqaleni kwexesha, banxulunyaniswa noothixo, imihlaba, izixeko kwaye babekhuthazwa ekubumbeni imisebenzi emikhulu yoluntu. Kule webhusayithi, uya kuba nakho ukufumana olu lwazi enkosi ku-padados-nombres.com.
Ngaba igama lakho liguqulelwe kwezinye iilwimi? Ngaba uyazi ukuba inendawo eyahlukileyo yesiNgesi? Ungabhala njani ngesiTaliyane, ngesiFrentshi ... okanye ngesiRashiya? Ngaba ukhe wacinga ukuba ungathanda igama elingcono kolunye ulwimi? Senza kube lula kuwe ukuze ufumane.
Ngaba igama lakho liyahambelana neqabane lakho?. Kukho amagama ahambelana nabanye, ngelixa amanye echasene ngokupheleleyo. Kuya kufuneka sazi ukuba umntu uhambelana ngakumbi okanye akathandani, angene kubudlelwane okanye azi ukuba uthembekile na. Kungenzeka ukuba umntu omnye axhomekeke ngakumbi okanye kancinci, ngelixa omnye enendawo engakumbi yokungathembeki, kwaye oku kunokwaziwa ngegama.
Numerología. Amagama akwanxulumene namanani, kwaye la manani ahambelana nethamsanqa kunye nethamsanqa. Akufanele ulibale malunga neenkcukacha.
Nantsi imizekelo embalwa yale nto sikuxelela yona: Intsingiselo kaPedro y Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Sofia.
Fumana intsingiselo yosana, inkwenkwe kunye negama lamantombazana, SIMAHLA ngokupheleleyo
Njengoko sele siphawulile, kunokwenzeka ukuba ujonge intsingiselo yegama ukuze wazi ukuba yeyona ilungele umntwana wethu wexesha elizayo. Siya kuba nomdla kakhulu ekufumaneni ulwazi oluninzi kangangoko kunokwenzeka ukuze sazi ukuba ngaba ilungile na.
Singalithanda igama kakhulu, kodwa asiyazi imvelaphi yalo, iingcambu zalo, kwaye olu lwazi lunokukwenza utshintshe ingqondo. Ngokufumana ulwazi "etafileni", kuya kuba lula ukwenza isigqibo.
Fumana igama eligqibeleleyo kulula enkosi kolu luhlu lulandelayo:
Amagama abantwana. Apha unokufumana amagama abantwana, awona athandwayo kwilizwe lethu nakwamanye amazwe aphesheya, lawo athe aba ngumkhwa, inqabileyo eya kuthi ibambe ingqalelo yethu ukusuka kumzuzu wokuqala, wangoku, wokuqala, owenziwe….
Amagama abantwana oqobo kunye amahle. Ukuba sele uyazi ukuba umntwana wakho uza kuba yinkwenkwe, emva koko ucofe apha kwaye ufumane amagama oqobo. Uya kufumana ukhetho olungaqhelekanga, olunentsingiselo yazo. Sikwanayo amagama ebhayibhile amakhwenkwe y amagama adumileyo abantwana.
Amagama amantombazana amahle. Kwaye ukuba sele uyazi ukuba iya kuba yintombazana, apha unokufumana izimvo eziza kukuvumela ukuba uthathe isigqibo. Unokufumana amagama angaphezulu okanye ngaphantsi, anentsingiselo ekhethekileyo, enqabileyo, ibhayibhile, kunye nentsingiselo yayo, njl.
Amagama kwezinye iilwimi. Ukuba awukwazi ukufumana igama elinomdla ngesiSpanish, mhlawumbi sinokuya kolunye ulwimi. Ukukhetha igama kolunye ulwimi kunzima kunokuba kubonakala, kuba sisenokungayazi eyona ntsingiselo, okanye uguqulelo kolunye ulwimi. Apha unokufumana uluhlu olufanelekileyo lwe Amagama esiNgesi kunye neefani, kwi Catalan, i-chinos, IsiJapane, IsiHebhere nakwezinye iilwimi ezininzi. Ngokucofa udidi oluhambelanayo, zonke ziya kuqala ukuboniswa.
Amagama ezilwanyana. Kukwabaluleke kakhulu ukwazi ukuba ungalikhetha njani igama lesilwanyana sasekhaya, ngaphezu kwayo nayiphi na into kuba yeyona nto uya kuyisebenzisa ebomini bayo bonke. Eli candelo liya kukunceda ufumane Amagama ezinja, imivundla, ikati, okanye nasiphi na esinye isilwanyana onaso. Uyakwazi ukufumana izimvo ezininzi eziza kukuvumela ukuba ufumane igama elifanelekileyo ngokweempawu zeqabane lakho elincinci. Sikwanazo izinto ezilinganayo zobufazi ukufumana awona magama alungileyo y amagama eekati.
Inyani yile yokuba akukho gama litsha liyiliweyo. Singatsho ukuba Uninzi lwamagama lwenziwa kwiminyaka emininzi eyadlulayo. Oko sikufumanayo namhlanje kukwahluka kwala magama, nangona kukho amanye awo eza kuthi ewonke.
Unokucinga ukuba intsingiselo yegama ayibalulekanga, kodwa kunjalo. Umzekelo olungileyo ligama le- Silvia, lo uthi "Umfazi Ongaqhelekanga" kwaye uneengcambu ngesiLatin.
IsiGrike, isiLatin nesiNgesi, imvelaphi yamagama
Uninzi lwamagama akhoyo ngoku aneengcambu zesiGrike, isiLatin okanye iAnglo-Saxon. Ekuqaleni awunakukunika ukubaluleka, kodwa ngokwenyani iyayenza, kwaye kakhulu. Umzekelo, phakathi kuluhlu lonke intsingiselo yamagama Elena yenye yezona zinto zinomdla, kuba oko kuthetha "Engaqhelekanga", igama elivela kwisiLatin.
Omnye umzekelo olungileyo wokuqonda ukubaluleka kwentsingiselo yamagama ufumaneka kwi Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Andrés Oku kuneengcambu kwisiGrike kwaye kuthetha "ubugorha, imbeko."
Njengomzekelo wokugqibela, i Igama likaRicardo, lithetha "uKumkani oqaqambileyo", kwaye iingcambu zawo ziJamani.
Ukuba ufuna ukuphanda intsingiselo yamagama Ngokwakho, awunakukhetha ngaphandle kokuya kwiKoran okanye eBhayibhileni, kwaye ubone ukuba bahambe njani ngokuhamba kwexesha. Ngoku, kukho namanye amagama angoku angaveliyo kwiirekhodi zamandulo. Umzekelo, igama le Iker kuqala kwilizwe laseBasque.
Ukuba ufuna ukwazi i-etymology kunye nemvelaphi yamagama, kuyafuneka ubuyele kwiiholographs ezinje ngeKoran okanye kwiBhayibhile eNgcwele. Nangona kunjalo, kukho amagama aphucukileyo, kuba ebesetyenziswa okokuqala kungekudala, njenge-Iker, eyaqala ukusetyenziswa kwilizwe laseBasque.
Kutheni ndinomdla wokwazi intsingiselo yamagama?
Ngaba kunomdla ngokwenene ukwazi i- Intsingiselo yegama? Inyani yile yokuba uninzi lwabantu lucinga ukuba hayi, igama linjalo.
Ngoku, kubaluleke kakhulu kunokuba kubonakala, kwaye zininzi izizathu ezibonisa oko. Apha sifunda ezinye zezona zibalulekileyo.
Mhlawumbi ukhe wazibuza yintoni ukusetyenziswa kokwazi ngokwenene intsingiselo yamagama… Ke unethamsanqa kuba uninzi lwabantu aludli ngokucinga ngayo ebomini babo bonke.
Uwele kwi imihlakulo zothando
Esona sizathu siphambili sokuba leyo ihlala ifunwa Intsingiselo yegama Kungenxa yokuba umntu omtsha ungene ebomini bethu kwaye siyayithanda. Ngale ntsingiselo siya kufuna ukwazi ngakumbi ngaye. Siya kuba nakho ukwazi ukuba ubuntu bakho bunjani kwaye ukuba siyahambelana okanye hayi.
Enkosi kwimvelaphi kunye nentsingiselo yamagama singafumanisa ukuba singa hlanya njani eluthandweni kulo mntu simthanda kakhulu. Siza kwazi ukuba isicwangciso esinaso engqondweni siza kusebenza, okanye ukuba kufuneka sijonge esona sibhetele.
Ethandweni nantoni na iyahamba, kwaye ukwazi ngakumbi ngobuntu bomntu, enkosi ngentsingiselo yegama, kunokunceda kakhulu kunokuba sicinga. Unokuthi usixelele ukuba unjani umlinganiswa wakho okanye ukuba bekunjani ngaphambili.
Khawufane ucinge ukuba ufuna ukulukuhla indoda kwaye intsingiselo yegama layo ichaza amandla, umtsalane kunye nokulukuhla. Kungenzeka ukuba, ukunikela ingqalelo kwezi mpawu, nguye onilahlekisayo. Nangona kunjalo, kukho amagama athile anokuthi, ngokwentsingiselo yawo, abonise ukuba ubunzima boyiso buphezulu.
Ngayiphi na imeko, Ukwazi intsingiselo yegama kukunceda wazi ukuhambelana kwayo.
Awazi ukuba uza kumbiza athini unyana wakho?
Ukukhangela intsingiselo yegama kunokusinceda sifumane igama eligqibeleleyo lonyana wethu wexesha elizayo o intombi, ukuba noluhlu lweembono esinokuthi senze isigqibo ngazo.
Sithetha ngesigqibo esibalulekileyo, kwaye kunjalo usana luya kubizwa ngelo gama ngonaphakadeIya kuchaza ubuntu bakho kunye nendlela umhlaba oza kukubona ngayo.
Ayisiyiyo kuphela ukuba kufuneka sikhokelwe "yindlela evakala ngayo", kodwa kufuneka sifunde imvelaphi, imbali, i-etymology, iingcambu, kunye nazo naziphi na ezinye iinkcukacha ezinxulumene noko. Kuya kufuneka uphinde uhlalutye abalinganiswa ebalini ababizwa ngendlela efanayo.
Ngaba uya kuba nesibindi, athembeke, ngexabiso lesinyithi, abe neentloni, athande, angenise, aphume, abe nobuhlobo? Igama elilungileyo linokwenza umahluko.
Olona khetho luqhelekileyo kukukhetha i Igama lebhayibhile. Ngale ndlela, jonga isimilo eBhayibhileni esinike ubomi kolo gama, kunye nentsingiselo yalo.
Kuyo yonke le webhusayithi uza kufumana iingcebiso ezininzi eziza kukunceda uthathe isigqibo.
Ukwazi intsingiselo yegama lakho uya kuba nakho ukuzazi ngcono
Ukwazi ukuba lithetha ukuthini igama lakho kuya kukunceda uthathe uhambo lokuzifumanisa ngokwakho wazi ngakumbi ngawe, ukwazi amandla akho, ubuthathaka bakho, kunye nolunye uphawu lobuntu bakho.
Iyamangalisa indlela abantu abangathethi ngayo xa besazi intsingiselo yegama lakhe, kwaye kukuba babubona ngokwenene ubuntu bakhe.
Ukuba uyazi ukuba ungubani, unokuzamkela ngaloo ndlela.
Ekugqibeleni, Esinye isizathu sokuba unomdla kwiintsingiselo zamagama kukuba ungathanda ukuzazi ngcono. Ukufunda intsingiselo kuya kukutyebisa ngaphakathi, sonke kufuneka siyikhangele kube kanye kubomi bethu.
Ukuba uhlala ugoba ngasemva ukufezekisa iinjongo zakho, unokuziva wahlukile xa kuthelekiswa nabanye, kuba akukho mntu ubeka umzamo omkhulu njengawe. Kungenzeka ukuba, ngokwegama lakho, uyanyamezela, kwaye uneempawu ekungekho namnye umntu onazo
Njengoko uqinisekisile, ukuba ngubani owaziyo intsingiselo yamagama, awuyi kufumana enye indawo engcono kunale webhusayithi ntsingiselo-eames.com. Unako ukuba nayo yonke le datha simahla.
Ukuba kukho igama esingenalo kwiwebhusayithi yethu, sicebisa ukuba ubonise nge icandelo lokunxibelelana nephepha.
© 2022 | intsingiselo-names.com: isichazi magama esisemthethweni samagama kunye nemvelaphi | Ngu-Ignacio Andújar